Anigu waxaan ahay gabar 13-sanno jir ah gurigana waxay ahayd mid caadi ka ah in wiilashu ay dhibaan oona taabtaan haweenka. Hadda halkana waa sidii oo kale. Anigu waan xishoonayaa ama waxaan dareemayaa ceeb. Qofkee i caawin kara? – Tips for refugees
Previous Previous post: Uur maku qaadi kartaa dhunkashada?
Next Next post: Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno jir ah saaxiibadayna waxay aadaan magaalada si ay u dhibaan una taabtaan gabdhaha ayaga oo midaasna ciyaar ka dhiganaya. Anigu ma doonayo in aan qayb ka noqdo. Maxaa ila habboon in aan sameeyo?